Health | Posted on Jun 21, 2019 by Yin Moe Shinn
နေ့တိုင်းမဖြစ်မနေ screenကြည့်နေရသူတွေအတွက်မျက်လုံးထိခိုက်မှုလျော့နည်းစေဖို့ 
အလွန်အကျုး screen time များသူတွေအတွက်အမြင်အာရုံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးသိထားသင့်သလိုတကယ်လိုက်နာဖို့ လည်းလိုအပ်တဲ့အချက်လေးတွေက...
ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာမျက်လုံးဆိုတာ အရေးအကြီးဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုမို့ ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ယနေ့ ခေတ်မှာပျမ်းမျှရုံးဝန်ထမ်းအများစုကနေ့ စဉ် computer screen တွေကိုမဖြစ်မနေ ကြည့်နေရပြီးကျန်ရှိနေတဲ့ mobile phone နဲ့ တခြား digital screen တွေကိုလည်းအလွန်အကျွံကြည့်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒါတွေကမျက်လုံးကိုအဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်စေပါတယ်။ သို့ ပေမယ့်မဖြစ်မနေကြည့်နေရခြင်းအပေါ်အရမ်းထိခိုက်မှုမဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်မှုတစ်ချို့ ကိုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ screen time များနေပြီဆိုရင်သင့်မျက်လုံးကိုချက်ချင်းအနားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ မျက်လုံးနီရဲ လာခြင်း ၊ မျက်သားခြောက်ခြင်း ၊ မျက်လုံးဝါးခြင်း ၊ ခေါင်းကိုက်ဇာတ်ကြောထိုးခြင်း စတာတွေကနေ ပိုဆိုးတဲ့ မျက်လုံးထိခိုက်မှုကိုဖြစ်စေတာကြောင့်အထူးဂရုစိုက်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပေါ့ပျက်ပျက်မနေသင့်တာမို့ မျက်လုံးကိုဘယ်လိုစနစ်တကျအနားပေးသင့်တယ်ဘယ်လိုစနစ်တကျနေသင့်တယ်ဆိုတာလေးတွေကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
၁. အလင်းရောင်စူးစူးတွေကို မျက်လုံးကတိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့်နေ့ စဉ်ကြည့်နေရတဲ့Computer screen နဲ့ ဖုန်းစတဲ့ screen တွေအားလုံးရဲ့ မျက်နှာပြင်အလင်းရောင်ကို လျော့ထားသင့်ပါတယ်။ ပုံမှန် display lighting ရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ကအသင့်တော်ဆုံးပါ။ သင့်အခန်းအလင်းရောင်ကိုလိုက်ပြီး computer screen ရဲ့ မျက်နှာပြင်အလင်းကို ညှိသင့်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့အရမ်းလင်းထိန်နေခြင်းကသင့်မျက်လုံးကိုရေရှည်အဆင်မပြေစေတာကြောင့်ပါ။ အဲဒီ screen lighting တွေကမျက်လုံးကိုအရမ်းထိခိုက်စေတာမို့ ဒီအချက်လေးကိုဂရုပြုသတိထားသင့်ပါတယ်။
၂. Computer ကိုအာရုံစိုက်ကြည့်နေရသူအများစုကမျက်တောင်ခတ်ဖို့ ကိုမေ့နေတတ်ပါတယ်။ မျက်တောင်ခတ်မှုအကြိမ်ရေလျော့နည်ြး့ခင်းကြောင့်မျက်သားခြောက်ခြင်းနဲ့ မျက်လုံးနီခြင်းတွေကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ရုံးခန်းတွေတိုင်းမှာ air-con တွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကလေထုကိုပိုခြောက်သွေ့ စေတဲ့အပြင် မျက်တောင်ခတ်ဖို့ ကိုပါမေ့နေမယ်ဆိုရင်တော့သေချာပေါက်သင့်မျက်သားကိုခြောက်သွေ့ စေမှာပါ။
နောက်ဆက်တွဲမျက်လုံးကိုထိခိုက်စေတဲ့ရောဂါတွေပါဖြစ်စေနိုင်တာမို့ သတိထားပြီးမျက်တောင်ခတ်ပေးဖို့ ရံဖန်ရံခါ မျက်လုံးအတွက်ထုတထားတဲ့မျက်စင်းခတ်ဆေးလေးတွေ သုံးပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
၃. မျက်လုံးညောင်းလာတဲ့အထိအာရုံစိုက်ပြီးရင်တော့သနားစရာသင့်မျက်လုံးလေးကို ခဏအနားပေးသင့်ပါတယ်။ compter screen ကိုဆက်တိုက်ကြည့်နေရာကနေခဏနားပြီး ၁၀မိနစ်ခန့် အနားပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါကို၁နာရီခြားတစ်ခါလောက်လုပ်နိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ အဲလိုအနားပေးတဲ့အခါ မတ်တပ်ခဏရပ်ပြီး အကြောဆန့်ခြင်း ကိုပါလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာသင့်ရဲ့ အမြင်အာရုံကိုသာမက မျက်ရိုး ၊ ဇာတ်ကြော ၊ ပခုံး ၊ခြေထောက် စတာတွေကိုပါ အငြောင်းပြေစေပြီးသင်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမှာပါ။ အပြင်ဘက်လေထုကသင့်အလုပ်ခွင်ထဲကလေထုထက်ပိုပြီးစိုစွတ်မှုရှိတာကြောင့်အဲ့လိုအနားပေးတဲ့အခါမှာ အပြင်ဘက်ကိုခဏထွက်ပေးသင့်ပါတယ်။ဒါဆိုမျက်လုံးညောင်းညာမှုကို သက်သာစေတဲ့အပြင် မျက်သားခြောက်သွေ့ မှုကနေ အသစ်ပြန်ဖြစ်စေပါတယ်။
၄. အပေါ်မှာပြောထားသလို အနားပေးခြင်းကို ထမလုပ်နိုင်တဲ့အခါတွေမှာ မျက်လုံးလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုအစားထိုးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ညောင်းနေတဲ့သင့်မျက်လုံးလေးအတွက်အထူးကောင်းမွန်စေမှာပါ။ 20-20-20 rule လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒါကတော့ မိနစ် ၂၀ကြာတိုင်း screen ကြည့်နေတဲ့သင့်မျက်လုံးကိုပေ ၂၀အကွာလောက်ကိုပြောင်းပြီးစက္ကန့် ၂၀ ခန့် ဟိုဟို ဒီဒီ ကြည့်ပေးသင့်ပါတယ်။ တနေရာထဲကိုမဟုတ်ဘဲ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ပြီးမျက်လုံးကစားလိုက်ခြင်းက သင့်မျက်လုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့နည်းစေတဲ့အပြင် အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေကိုပါသက်သာစေတာမို့ သတိထားပြီးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အဲလိုအချိန်မျိုးမှာမျက်တောင်ခတ်ပေးတာကိုပါသတိထားပြီးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်နော်။
၅. နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ ကတော့ သင့်ရဲ့ computer screen ကိုသင်နဲ့ ၂၅လက်မ အကွာ ( လက်တစ်လံအကွာ)လောက်မှာထားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ screen နဲ့ သင့်မျက်လုံးအရမ်းနီးကပ်မနေဘဲ အမြင်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်အဆင်ပြေစေမှာပါ။ screen ပေါ်ကစာလုံးအရွယ်အစားကိုလည်း သင့်အမြင်မှာအရမ်းသေးမနေအောင်ချိန်ညှိသင့်ပါတယ်။ဒါမှသာ ကြာရှည်စွာအာရုံစူးစိုက်ရမယ့်သင့်မျက်လုံး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကနေ ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
အခုဆိုလူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်ပြီး လုပ်ကိုလုပ်သင့်တဲ့ မျက်လုံးဂရုစိုက်မှုလေးတွေကိုပြောပြပေးထားတာမို့ တကယ်ကိုသတိထားပြီးလိုက်နာသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ဒါမှသာ အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့သင့်မျက်လုံးမထိခိုက် မပျက်စီးဘဲကျန်းမာနေမှာပါ။